Xuska Maalinta Ciidanka Cirka oo lagu qabanayo Muqdisho | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Xuska Maalinta Ciidanka Cirka oo lagu qabanayo Muqdisho
Xuska Maalinta Ciidanka Cirka oo lagu qabanayo Muqdisho
Munaasabad loogu dabaaldegayo sanadguuradii 58-aad ee ka soo wareegatay markii la aas aasay Ciidanka Cirka Soomaaliya ayaa maanta lagu wadaa in lagu qabto Gobolada dalka iyo Magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya.
Munaasabadda lagu qabanayo magaalada Muqdisho gaar ahaan xarunta Ciidanka Cirka oo ku taalla xerada Afasiyooni ayaa waxaa la filayaa in ay ka qeyb galaan Masuuliyiin ka tirsan Dowladda Federaalka oo ay ugu horeeyaan Wasiirka Gaashaandhigga Xukuumadda Federaalka Maxamed Mursal Sheekh C/raxmaan, Taliyeyaasha Ciidamada, Saraakiil Ciidan iyo masuuliyiin kale.
Masuuliyiinta Dowladda Federaalka iyo shacabka Soomaaliyeed ayaa durba bilaabay in ay Hambalyo horudhac ah u diraan Sarreeyeyaasha, Saraakiisha, Saraakiil Xiggeenada, Alifleyda iyo Dableyda Ciidanka Cirka oo qeyb ka ah Taliska Xoogga dalka Soomaaliyeed.
Ciidanka Cirka Soomaaliyeed waxa uu lahaa Awood ciidan oo dhameystiran, waxayna ahaayeen Cudud Bulshadda Soomaaliyeed ay ku faanto, iyada oo hada la rajeynayo Maqaamkii iyo Maamuuskii ay lahayeen Ciidankaasi inay soo laaban doonto.
Ciidanka Cirka Soomaaliya ayaa la aas aasay 15-kii February sanadkii 1960-kii, iyagoo door firfircoon ka soo qaatay Difaacidda hawada dalka mudadii burburka ka hor, waxaana haatan muuqata dedaallo dib loogu dhisayo ciidamada oo awood buuxda u heli doona inay hantaan koontaroolka hawada Soomaaliya oo dhan.